Soo-saareyaasha Alaabooyinka - Warshada Alaabada Shiinaha & Iibiyeyaasha - Qaybta 2
Mesh qurxinta birta ee qaybinta waxaa ka mid ah: daah bir ah oo bir ah, daah toosan, daah bir ah, daah naxaas ah, daah toosan, daahyada mesh birta ah ee wareega, daahyada mesh birta qurxinta, daahyada birta birta ah ee daahyada, daahyada birta saqafka ah.
Dayrka dayrka waxa kale oo loo yaqaan xayndaab bir ah, waxaa loo isticmaalaa in dugsiyada, dhismayaasha xafiisyada, dhismayaasha dawladda, xayndaabka ganacsiga, goobaha isboortiga, Guryaha warshadaha, goobaha madadaalada, dhismayaasha la deggan yahay, kaabayaasha adeegyada.
Ilaalada wadooyinka ee dawlada hoose waxa kale oo loogu yeedhaa taraafikada magaalooyinka. Waa qurux badan oo cusub, fududahay in la rakibo, ammaan ah oo la isku halayn karo, qiimuhuna waa mid wanaagsan. Waxaa lagu dabaqi karaa go'doominta halbowlayaasha taraafigga magaalada, suumanka go'doominta cagaaran ee bartamaha waddooyinka, buundooyinka, waddooyinka sare, waddooyinka magaalada iyo irdaha canshuuraha waddooyinka.
Badbaadada balakoonka bannaanka ilaaliyaha balakoonka birta birta ah
Ilaalada birta ee Zinc ayaa laga arki karaa meel kasta oo nolosheenna ah. balakoonka ilaaliyaha ayaa badanaa la isticmaalaa. Sida alaab cusub oo waardiye ah, birta ilaaliyaha zinc waxay isku daraysaa qurxinta iyo ku shaqaynta, sidoo kale waxay noqon kartaa mid waarta gudaha deegaanka bannaanka. Barkinta balakoonka ayaa inta badan qaadata ilaalinta trapezoidal. Inkasta oo ilaaliyaha balakoonka uu yahay badeeco la habeeyey, waxa kale oo jira tiro cabbirro guud ah iyo tilmaamo xagga warshadaha ah.
Xayndaabka xayndaabka leh ee siliga daabka garka garka
Xariga daabku wuxuu ka kooban yahay daab iyo shabag bir ah. Way is difaaci kartaa, ama waxay dejin kartaa xayndaab siligga ah ama dayr alxan leh. Marka la xirxiro siliga mandiilada, way fududahay in la sameeyo gariiradda gariiradda.
Mesh birta galvanized kulul cawska mesh Kraal mesh
Beeraha, xayndaabyada waxaa loo isticmaalaa in xoolaha lagu ilaaliyo ama ka baxsan aagga. Waxay ka samaysan karaan walxo kala duwan, iyadoo ku xiran dhulka, goobta iyo xayawaanka la xakameynayo. Celcelis ahaan joogga inta badan dayrarka beeruhu waa ilaa 4 fiit (1.2 mitir), meelaha qaarna dhererka iyo qaab dhismeedka qalimaan xoolaha loo isticmaalo waxaa nidaamiya sharci.
Ilaalinta jiirada webiga mesh laba geesood ah
Iska caabbinta daxalka xooggan, dabacsanaanta guud ee wanaagsan iyo xasilloonida.
Siligga birta kaarboonka ah ee tayada hooseeya ee tayada sare leh ee isku xirka silsiladda
Isku xirka silsiladda, oo sidoo kale loo yaqaan mesh-ka laadlaadsan, mesh dheeman.
Noocan ah alaabta mesh silig: tayo sare leh silig bir kaarboon hooseeyo.
Dharka iyo sifooyinka: waxay ka samaysan tahay jillaab; Tolnimadu waa mid fudud, qurux badan oo wax ku ool ah.
Mesh alxanka dhismaha galvanized kulul
Shabakadda siligga birta ah ee alxanka leh waxay ka samaysan tahay silig bir ah oo tayo sare leh. Waa adkaysi badan oo aysiidh iyo alkali ah, si adag welded, qurux badan oo si ballaaran loo isticmaalo.
Xadhkaha mesh-ka-alxanka ah waa kuwa toosan oo mawjadaha (sidoo kale loo yaqaan shabaqyada Nederlandka). Marka loo eego qaabka dusha mesh-ka, waxa loo qaybin karaa xaashida siliga welded iyo duub duubka siliga alxanka.
<< < kii hore 1234 Xiga > >> Bogga 2/4